Wararka Caalamka | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News | Page 728
Home facebook.com Wararka Caalamka Page 728
Garsoore Maxkamadeed oo Markii Ugu Horeysay Gabar Muslimad ah Xijaab Soo Xiratey.
Booliska kenya sarkaal ka tirsan oo gaarigiisii Qarax loogu xirey laguna diley.
Sarkaal ka tirsanaa Booliiska Kenya ayaa lagu dilay maanta oo Jimco ah qarax miino oo lala beegsaday gaari saraakiil booliiska dalka Kenya ka tirsan, kaasoo ka dhacay deegaanka Hindi-Bodhey oo ka tirsan deegaanka Laamu ee dalka Kenya, iyadoo qaraxaas ay dhaawacyo kala duwan kasoo gaareen saddex sarkaal oo kale. Qaraxan...
DHaqaale ayaa leysugu faaney maxaad ka ogtahey madaxda africa iyo sida ay u kala lacag badan yihiin.
Qaaradda Afrika oo ah Qaaradda labaad ee ugu weyn caalamka, isla markaana ah tan labaad ee ugu dadka badan caalamka oo dhan, ayaa waxay ka kooban 54-dal oo ay hoggaamiyaan madax qaarkood ka mid ah ay soo hoggaaminayeen dalalkooda muddo Rubuc Qarni ka badan. Madaxda qaarkood iyo qoysaskooda ayaa ah...
Amisom oo taliye cusub hawshooda la wareegey iyo kii horoo Muqdisho ka dhoofey.
Taliyihiin ciidamada Midowga Afirka ee Somalia , Jen. Jonathan Rono ayaa maanta ka ambabaxay magaalada Muqdisho kaddib markii uu dhameystay xilligii howsha hoggaaminta AMISOM oo ahayd muddo 15-bilood. Jen. Rono ayaa waxaa sagootiyay cutubyo ka tirsan ciidamada Midowga Afirka ee Somalia oo ay ka dhex-muuqdeen taliye ku xigeenka qorsheynta AMISOM,...
Gudoomiyaha barlamaanka prof jawaari oo sheegey in maalinta dhalashada Nebi Muxamed NNKHA ay kamid noqoneyso maalmaha Qaranka.
Guddoomiyaha baarlamaanka Somalia, Maxamed Sheekh Cismaan ayaa maanta sheegay in maalinta xuska dhalashada Nebigeenna Muxamed , inay ka mid noqon doonto maalin Qaran oo ka mid ah ciidaha dalka uu leeyahay ee shaqaalaha la fasaxo. Jawaari ayaa hadalkaan ka sheegay munaasabad lagu xusayay dhalashadii Nebi Muxamed oo maanta...
Isbitaal ku yaal magaalada Jizan ee dalka sucuudiga oo dab ka qarxey ay ku dhinteen 31 qof.
Ugu yaraan 31-ruux ayaa ku dhintay in ka badan 107-qof oo kalena way ku dhaawacmeen dab ka kacay isbitaal ugu weyn gobolka Jizan ee dalka Saudi Arabia, sida ay sheegtay hay’adda difaaca rayidka ah ee boqortooyada Saudi Arabia. Dabka oo loo maleynayo inuu ka dhashay qarax koronto ayaa wuxuu burbur...
Munaaasabad lagu xusayey dhalashadii nebi Muxamed NNKHA oo ka dhacdey magaalada B/wene xarunta gobolka Hiiraan.
Maanta oo Khamiis ah ayaa munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo lagu maamuusayay dhalashada Nebi Muxamed NNKH, waxaa ay ka dhacday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Munaasabada oo ahayd mid si weyn u soo jiidatay indhaha bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne, ayeey ka qeyb-galayaasha iyaga oo si Qurux...
Madaxweynaha Somaliland Siilaanyo oo magacaabey qaar kamid noqonaya maamulkiisa.
Madaxweynaha Somaliland Axmed Siillaanyo ayaa xallay xilli dambe soo saaray isku shaandheyn iyo magacaabid masuuliyiin cusub, taas oo qaarna xilkii ka qaaday qaarna isku bedelay. War-saxaafadeed uu ku saxeexan yahay afhayeenka madaxweynaha Xuseen Deyr oo nuqu ka mid ahi warsom soo gaadhay ayaa u qornaa sidan: “Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland, Mudane Axmed...
Qaar ka mid ah xildhibaanada barlamaanka oo soo dhaweeyey booqashada iyo wada hadalada m/weyne Xasan SHeekh uu tagey B/weyne.
Xildhibaan C/qaadir Sheekh Xanafi oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka FS ee kasoo jeeda gobolka Shabeellada dhexe ayaa soo dhaweeyay wada-hadalladii labadii maalmood ee la soo dhaafay magaalada Beledweyne uga socday odayaasha iyo waxgaradka gobolka Hiiraan oo inta badan looga wadda hadlayay qorshaha dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Xildhibaanka...
Ciidanka booliska AMISOM taliyahooda oo booqasho ku tagey magaalada Kismaayo.
Taliyaha Booliiska AMISOM, Anand Pillay oo ay wehlinayeen taliye ku xigeenkiisa, Christine Alalo oo hoggaaminayay saraakiil kala duwan oo ay ku jiraan booliis ayaa booqasho ku tagay Kismaayo 21-kii bishaan December. Ujeedka safarka ayaa lagu sheegay inuu ahaa sidii kulan ay ula qaadan lahaayeen wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland, Maxamed Warsame...
Ergeyga Q/M key oo sheegey in Soomaaliya horumar la taaban karo ay ku talaabsatey,mashaariic wax tar lihina ay hada ka socdaan.
Ergayga Qaramada Midoobay ee Somalia, danjire Nicholas Kay ayaa sheegay in Somalia aysan haatan ahayn waddan guul-darreystay, ayna soo kabanayso, kaddib sannado uu colaado kusoo jiray. Danjire Kay oo u warramayay Wakaaladda Wararka ee AP ayaa xusay in saddexdii sano ee lasoo dhaafay ay Soomaaliya kusoo laabanaysay xasillooni, inkastoo ay...
1...727728729...738Page 728 of 738